” သူ့အား နာမည်ဖျက်ကာ သတင်းတွေတင်နေတဲ့ CeleSpySmall pageပိုင်ရှင်ဟာ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်နေကာ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသက်သေနဲ့တကွထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်” – myannewsmedia.com
” သူ့အား နာမည်ဖျက်ကာ သတင်းတွေတင်နေတဲ့ CeleSpySmall pageပိုင်ရှင်ဟာ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်နေကာ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသက်သေနဲ့တကွထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်”
December 4, 2021 sweety	0 Comments
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ဒီနေ့မှာ သူ့အား သစ္စာဖောက်ကာ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းအကြောင်းကို ပြောပြလာတာပါ။သူ့အနေနဲ့ယွန်းယွန်းနဲ့စည်သူဝင်းတို့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုပြဿနာတွေမှာ သူ့ကိုလည်းပရိသတ်တချို့ကပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့”ရန်ပိုင်စိုး(Liam) မင်းငါ့နောက်ကျောကို ဒါးနဲ့ထိုးရတာ မပီးတော့ဘူးလားကွာမင်းမမောသေးဘူးလားမင်းလုပ်နေတာတွေ ငါအကုန်သိတယ်…..ငါစိတ်ထဲမှာထင်နေလို့ ငါ့ story ကို custom လုပ်တင်လိုက်တာ နောက်နေ့ မင်းရဲ့ ”Cele Spy Small “ ဆိုတဲ့ page မှာငါထင်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းတက်လာတယ်သားကြီးရာ.. ငါတို့ခင်မင်မှုကို မျက်နှာထောက်ပီး မတင်ဖို့လုပ်ထားပေမယ့် ပိုပီးဆိုးလာလို့ တင်မှရတော့မယ် သားကြီးရေ
နိူင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် အားလုံး စိတ်ညစ်နေကြချိန်မှာ ငါ့ကိုနင်းပီးမှမင်း page ကို followers ရှာတာတွေ ရပ်သင့်ပါပီ သူငယ်ချင်းရာဒီထက်ရှင်းတာ မရှိတော့ပါဘူးမင်းဟုတ်မဟုတ် ငါစမ်းကြည့်တာ မင်းငြင်းခြင်သေးလား? “ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သက်သေတွေကိုအချက်ကျကျတင်ပြလာခဲ့တာပါ။
Fri Exceptလုပ်ကာတင်ခဲ့တဲ့my dayတွေကို “ကျန်တဲ့2viewers က ရော လို့ဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်က ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက် …ယားလို့တောင်ကုတ်မအားဘူး.. သူတို့အကြောင်းကိုလဲငါသိတယ် သူတို့က အဲလိုအောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တွေလဲမလုပ်ပါဘူးဗျာ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ တကယ့်ကို မထင်ထားတဲ့သူကနောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ အုပ်စိုးခန့်အတွက် အားပေးစကားပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။
” သူ႔အား နာမည္ဖ်က္ကာ သတင္းေတြတင္ေနတဲ့ CeleSpySmall pageပိုင္ရွင္ဟာ သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးျဖစ္ေနကာ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးခံခဲ့ရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုသက္ေသနဲ႔တကြထုတ္ျပလာတဲ့ အုပ္စိုးခန္႔”
CeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ အုပ္စိုးခန္႔ကေတာ့ဒီေန႔မွာ သူ႔အား သစၥာေဖာက္​ကာ ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထိုးခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပလာတာပါ။သူ႔အေနနဲ႔ယြန္းယြန္းနဲ႔စည္သူဝင္းတို႔လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈျပႆနာေတြမွာ သူ႔ကိုလည္းပရိသတ္တခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုမႈေတြရွိခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့”ရန္ပိုင္စိုး(Liam) မင္းငါ့ေနာက္ေက်ာကို ဒါးနဲ႔ထိုးရတာ မပီးေတာ့ဘူးလားကြာမင္းမေမာေသးဘူးလားမင္းလုပ္ေနတာေတြ ငါအကုန္သိတယ္…..ငါစိတ္ထဲမွာထင္ေနလို႔ ငါ့ story ကို custom လုပ္တင္လိုက္တာ ေနာက္ေန႔ မင္းရဲ႕ ”Cele Spy Small “ ဆိုတဲ့ page မွာငါထင္တဲ့အတိုင္းခ်က္ခ်င္းတက္လာတယ္သားႀကီးရာ.. ငါတို႔ခင္မင္မႈကို မ်က္ႏွာေထာက္ပီး မတင္ဖို႔လုပ္ထားေပမယ့္ ပိုပီးဆိုးလာလို႔ တင္မွရေတာ့မယ္ သားႀကီးေရ​ႏိူင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အားလုံး စိတ္ညစ္ေနၾကခ်ိန္မွာ ငါ့ကိုနင္းပီးမွမင္း page ကို followers ရွာတာေတြ ရပ္သင့္ပါပီ သူငယ္ခ်င္းရာဒီထက္ရွင္းတာ မရွိေတာ့ပါဘူး
မင္းဟုတ္မဟုတ္ ငါစမ္းၾကည့္တာ မင္းျငင္းျခင္ေသးလား? “ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သက္ေသေတြကိုအခ်က္က်က်တင္ျပလာခဲ့တာပါ။
Fri Exceptလုပ္ကာတင္ခဲ့တဲ့my dayေတြကို “က်န္တဲ့2viewers က ေရာ လို႔ဆိုရင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က ျပည္သူခ်စ္တဲ့အႏုပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္ …ယားလို႔ေတာင္ကုတ္မအားဘူး.. သူတို႔အေၾကာင္းကိုလဲငါသိတယ္ သူတို႔က အဲလိုေအာက္တန္းက်တဲ့အလုပ္ေတြလဲမလုပ္ပါဘူးဗ်ာ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ တကယ့္ကို မထင္ထားတဲ့သူကေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထိုးတာကို ခံလိုက္ရတဲ့ အုပ္စိုးခန္႔အတြက္ အားေပးစကားေျပာခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
← ” အဖေ့ခြေရာကိုနင်းကာ ငယ်ရွယ်စဥ်ကလေးဘဝထဲကဂီတလောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာ ၁၇နှစ်ရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အိမ့်ချစ်”
” သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကြောင့်သားသမီးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိဘတွေအတွက်ဖြေမဆည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သန္တာလှိုင်” →